October 10, 2020 - Amawpyay
သင့်ချစ်သူ သင့် အပေါ်ဖောက်ပြန်နေမှန်း သိရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်သင့်သလဲ ?
သင့်ချစ်သူ သင့် အပေါ်ဖောက်ပြန်နေမှန်း သိရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်သင့်သလဲ ? ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ကြားက သံယောဇဉ်တွေ၊ အချစ်တွေ၊ အမှတ်တရတွေဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်မှ ဖြစ်တည် လာကြ ရတဲ့ အရာတွေ ပါပဲ။ ဒီလိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်နေတုန်း အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ကများ စတင်ဖောက်ပြန် လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ relationship ဟာ မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ ပြီးဆုံး သွားတာ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယုံကြည်မှု ပျောက်ကွယ် သွားလို့ ပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ကွယ်ရာမှာ ဖောက်ပြန်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ကလည်း အဲဒီကိစ္စကို သိထားပြီး ဖွင့်မပြောချင်ရင် သင်ဘာဆက်လုပ် မလဲ။ …
လူငယ်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အချက် (၄) ချက်
လူငယ်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အချက် (၄) ချက် ၁။ ပုံမှန်ပိုက်ဆံစုပါ ၂။ ပုံမှန်စာဖတ်ပါ ၃။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါ ၄။ စည်းကမ်းတကျအမှိုက်ပစ်ပါ ၁။ ပုံမှန်ပိုက်ဆံစုပါ ဝင်ငွေရှိတဲ့ လူငယ်က ဝင်ငွေကိုစုပါ မုန့်ဖိုးရတဲ့ လူငယ်က မုန့်ဖိုးကို စုပါ။ အနည်းဆုံး ရသမျှ ပိုက်ဆံထဲ က၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ပုံမှန်စု ကြည့်ပါ။ ပိုများများစုနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ပိုက်ဆံစု တတ်တဲ့ အကျင့်လေးစွဲသွားတဲ့အခါ ပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည် လာပါ လိမ့်မယ် စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်လာတဲ့ အခါ ပိုပိုစုချင် လာလ်ိမ့်မယ် မလိုအပ် တာတွေကို ကုန်ရမှာ နှမြောတတ်လာမယ် တကယ် …
မနာလိုစိတ်ဆိုတာ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် မနာလိုစိတ် ရှိတဲ့ သူနဲ့ မရှိတဲ့သူ ဆိုတာ မျက်နှာမှာတင် အရမ်းကွာ တယ် လှတာ မလှတာထက် အေးချမ်းတာနဲ့ ပူလောင်တာ မှာ သိသာ လွန်းတယ် ဘယ်လိုပဲ ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့ ခံစားချက် အစစ်အမှန် ကိုတော့ ဖုံးကွယ်လို့ မရပါဘူး အထူးသဖြင့် မျက်နှာမှာပေါ့ မျက်နှာလေးက ဘယ်လောက်ပဲ လှနေပါစေ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေဝင် လာရင် အကြည်ဓာတ် တွေ ပျောက်ဆုံးပြီး ရုပ်ဆိုး သွားတတ်တယ် မနာလိုစိတ် ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အရာ တစ်ခု မဟုတ်လို့ မမွေးမြူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ တော်တဲ့သူ တွေ့တဲ့ အခါ ချီးကျူး …